Dagaal Iyo Duqeyn Ka Dhacday Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Dagaal Iyo Duqeyn Ka Dhacday Gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin gaar ahaan Guutada Madaafiicda waxey saaka aroortii Tiro Madaafiic ah ku garaaceen saldhiga ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen deegaanka Danow ee duleedka degmada Qoryooley.
Jugta Madaafiicda waxaa si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Shabeelada hoose,waxeyna Ilo wareedyo xaqiijiyeen in Madaafiicda ay ku dhaceen Saldhiga taasi oo muujineyso iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo askarta Shisheeyaha kasoo gaartay duqeyntaasi.
Dhanka kale Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey weerar qorsheysan ku qaadeen saldhiga shisheeyaha ee deegaanka Numbar-60 ee gobalka Shabeelada hoose,dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Labadan Weerar ayaa kusoo aadaya xilli sidoo kale Saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay cagta mariyeen Isbaaro maleeshiyaatka dowlada ay dhigteen Tuulada Dal-biyaango oo u dhaw deegaanka Danow ee duleedka degmada Qoryooley taasi oo aheed isbaaro maleeshiyaatka Murtadiinta ay si aad ah ugu dhibaateen jireen dadka iyo gaadiidka Safarka ah.